စကရင်ပုံနှိပ်ခြင်း၏ အရောင်ပြောင်းလဲမှုများ၊ ဤအချက်များကို အာရုံစိုက်မိပါသလား။
Takeaway: ပိုးထည်စခရင် အလှကုန်ထုပ်ပိုးပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ရာတွင် အလွန်အသုံးများသော ဂရပ်ဖစ်ပုံနှိပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ပုံနှိပ်မင်ပေါင်းစပ်ခြင်းအားဖြင့် မျက်နှာပြင်ပုံနှိပ်ခြင်းစခရင်၊ စခရင်ပုံနှိပ်စက်မှင်များကို ဂရပ်ဖစ်ကွက်ကွက်ကွက်မှ substrate သို့ လွှဲပြောင်းပေးခြင်း၊ ၌...
ဒီတစ်ခါတော့ အရောင်ကွဲပြားမှုကို အာရုံစိုက်ပါမယ်။
admin မှ 22-01-12 ရက်နေ့တွင်
ပုံနှိပ်အရာဝတ္ထုတွင် အချို့သောအရောင်ကွာခြားချက်ရှိပါသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အချို့သောအတွေ့အကြုံနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်အရ ဒီဇိုင်းမူကြမ်း၏အရောင်နှင့် နီးစပ်မှသာ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသောအရာကို ပြုလုပ်နိုင်သည်။ဒီတော့ အရောင်ကွဲပြားမှုကို ဘယ်လိုထိန်းချုပ်မလဲ၊ ပုံနှိပ်ထုတ်ကုန်ကို ဒီဇိုင်းမူကြမ်းရဲ့ အရောင်နဲ့ နီးစပ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။လုပ်နည်းလေးကို အောက်မှာ မျှဝေလိုက်ပါတယ်...
Shrink Film Label ၏ အင်္ဂါရပ်များနှင့် အားသာချက်များနှင့် ပစ္စည်းရွေးချယ်မှုဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများ
ကျုံ့တံဆိပ်သည် အလွန်လိုက်လျောညီထွေရှိသော၊ ပလပ်စတစ်၊ သတ္တု၊ ဖန်နှင့် အခြားထုပ်ပိုးသည့်ကွန်တိန်နာများကို အရည်အသွေးမြင့်မားသောပုံစံများနှင့် ထူးခြားသောပုံစံများပေါင်းစပ်မှုကြောင့် အရည်အသွေးမြင့်မားသောပုံစံများနှင့် ထူးခြားသောမော်ဒယ်လ်များပေါင်းစပ်မှုကြောင့် အကျုံ့သွားသောတံဆိပ်ကို အလှဆင်နိုင်သည်။ဤစာတမ်းတွင် အင်္ဂါရပ်များနှင့် အားသာချက်များကို ဖော်ပြထားပါသည်။ ...
အလှကုန်ထုပ်ပိုးပစ္စည်းများတွင် Pearlescent Pigment ကိုအသုံးပြုခြင်း။
နိဒါန်း- အလှကုန်အများစုသည် တန်ဖိုးမြင့်လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများဖြစ်ကြပြီး ထုတ်ကုန်များ၏အသွင်အပြင်သည် ဝယ်သူများ၏စိတ်ပညာအပေါ် ကြီးမားသောလွှမ်းမိုးမှုရှိပါသည်။ထို့ကြောင့် အလှကုန်ထုတ်လုပ်သူများသည် အများအားဖြင့် အလှကုန်ထုပ်ပိုးမှုပြုလုပ်ရာတွင် အလွန်လှပ၍ တွေးခေါ်စရာ၊ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒါကလည်း မြင့်မားတဲ့ လိုအပ်ချက်ကို ဖြစ်စေတယ်...
နိဒါန်း- ပုံနှိပ်အရာဝတ္ထုတစ်ခု၏ တောက်ပမှုသည် ပုံနှိပ်မျက်နှာပြင်၏ အလင်းပြန်မှုသို့ အလင်းပြန်နိုင်မှု အတိုင်းအတာကို အထူးထူးခြားသော ရောင်ပြန်ဟပ်နိုင်စွမ်းနှင့် နီးစပ်သည့် အတိုင်းအတာကို ရည်ညွှန်းသည်။စက္ကူ၊ မှင်၊ ပုံနှိပ်ဖိအား နှင့်...
ထုပ်ပိုးမှုဒီဇိုင်းအတွက် အကြံပြုချက် ခြောက်ချက်
ထုပ်ပိုးမှုဒီဇိုင်းအရည်အသွေးသည် လုပ်ငန်း၏အရည်အသွေးနှင့်မညီမျှသော်လည်း၊ ကုမ္ပဏီတစ်ခုသည် ထုပ်ပိုးမှုဒီဇိုင်းကိုပင် ဂရုမစိုက်ပါက၊ စားသုံးသူများသည် ကုန်ပစ္စည်း၏အရည်အသွေးကို အာရုံစိုက်လိမ့်မည်၊အရည်အသွေးက ပထမအချက်ဆိုတာ ငြင်းစရာမရှိပါဘူး...
Printed Matter ၏ အရည်အသွေးနှင့် ပတ်သက်၍ ဤအချက်များကို သတိပြုသင့်သည်။
21-09-11 ရက်နေ့တွင် admin မှ
နိဒါန်း- Printed matter သည် စာသားနှင့် စာသားရိုက်နှိပ်ခြင်း၏ မျက်နှာပြင်မှတဆင့် ၎င်း၏တန်ဖိုးကို ပြသရန်၊ အရောင်မဲ့ အကြည်အလွှာဖြင့် အုပ်ထားသော ပုံနှိပ်အရာဝတ္ထု၏ မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် အလင်းရောင်၊ အဆင့်လိုက်ပြီးနောက်၊ ပါးလွှာစေရန် အခြောက်ခံကာ ပုံနှိပ်စာ၏ မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် အခြောက်ခံရန်၊ ယူနီဖောင်း ဖောက်ထွင်းပြီး...
Color Box Printing ၏ အရည်အသွေးကို မည်သို့မြှင့်တင်ရမည်ကို သင်သိပါသလား။
နိဒါန်း- ပြင်းထန်သောစျေးကွက်ပြိုင်ဆိုင်မှုတွင် ကုန်ပစ္စည်းများ၏ ပြင်ပပုံသဏ္ဍာန်သည် ပို၍အရေးကြီးလာသည်၊ အရောင်သေတ္တာသည် ၎င်း၏အဆင့်မြင့်၊ သိမ်သိမ်မွေ့မွေ့၊ လှပခြင်းကြောင့် ကုန်ပစ္စည်းထုပ်ပိုးမှု၏ ပြင်ပပုံသဏ္ဌာန်အတွက် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်လာသည်၊ အရောင်သေတ္တာသည် ပေါ့ပါးရုံသာမက၊ သယ်ယူရလွယ်ကူပြီး ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်...
ထုပ်ပိုးမှုဒီဇိုင်းကို လှပဆန်းသစ်သော တွေးခေါ်မှုတွင် အဘယ်အရာကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သနည်း။
စိတ္တဇ- ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ထုပ်ပိုးမှုဒီဇိုင်းတွင်၊ ထုပ်ပိုးမှုဒီဇိုင်း၏ အနုပညာအလှနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်တာ အလှတရားတို့သည် အော်ဂဲနစ်ပေါင်းစည်းထားသော ဆက်ဆံရေးဖြစ်သင့်သည်၊ လုပ်ငန်းသုံးအလှတရားသည် အနုပညာအလှတရား၏ အခြေခံနှင့် အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အလှတရားများပေါ်တွင် အနုပညာအလှတရားများဖြစ်သည်။ဒီစာတမ်းက ဆက်နွယ်မှုကို ရှင်းပြတယ်...
ပစ္စည်းရွေးချယ်ခြင်းမှ ပုံနှိပ်ခြင်းအထိ ထုတ်ကုန်ချောအထိ၊ ဤသည် shrink film labels များကို ထုတ်လုပ်ပုံဖြစ်သည်။
admin မှ 21-08-16 ရက်နေ့တွင်
နိဒါန်း- ကျုံ့ရုပ်ရှင်တံဆိပ်၏ လိုက်လျောညီထွေရှိမှုသည် အလွန်ခိုင်မာသည်။၎င်းကို ပလပ်စတစ်၊ သတ္တု၊ ဖန်နှင့် အခြားထုပ်ပိုးသည့် ကွန်တိန်နာများအတွက် အလှဆင်နိုင်သည်။Shrink film sleeve label သည် အရည်အသွေးမြင့် ပုံစံများနှင့် ထူးခြားသောပုံစံများကို ပေါင်းစပ်ထားနိုင်သောကြောင့် ဈေးကွက်တွင် ပိုမိုရေပန်းစားလာပါသည်။ဒီဆောင်းပါးကို မျှဝေလိုက်ပါတယ်...
အသုံးများသော မှင်ထည့်ပစ္စည်းများအကြောင်း သင်မည်မျှသိသနည်း။
admin မှ 21-07-28 ရက်နေ့တွင်
ပုံနှိပ်ပတ်ဝန်းကျင်တွင် အပူချိန်နှင့် စိုထိုင်းဆ ကွာခြားမှုများကြောင့်၊ မတူညီသော ဂုဏ်သတ္တိများနှင့် ပုံနှိပ်နိုင်မှု အခြေအနေများ၊ မှင်ရောင်ခြယ်ပစ္စည်း အမျိုးအစားတစ်ခုစီ၊ ဆက်စပ်ပစ္စည်းနှင့် ဖြည့်စွက်ပစ္စည်းအချိုးအစားအလိုက် အသုံးပြုသည့်လင့်ခ်များသည် လိုအပ်ချက်ကို မပြည့်မီသေးပါက၊ t...
သုံး-ဘက်မြင် အပူတံဆိပ်တုံး အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှု အမှတ်များနှင့် ချို့ယွင်းချက်များကို ကုသခြင်း။
သုံးဖက်မြင် အပူတံဆိပ်ခတ်ခြင်းသည် အတုအပနှင့် အနုပညာအကျိုးသက်ရောက်မှု ကောင်းမွန်သည့် နှိပ်ကွက်နှင့် ပူသောတံဆိပ်ခတ်ခြင်း၏ ပေါင်းစပ်အကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး အတုအပနှင့် အနုပညာဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသော ကြောင့် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုခဲ့သည်။သို့သော် သုံးဖက်မြင် အပူစုပ်ထုတ်ခြင်း၏ အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှုသည် အတော်လေး ရှုပ်ထွေးသော ပြဿနာဖြစ်သည်။ဤစာတမ်းသည် အတိုချုံးဖော်ပြသည်...
Fuzhou Huaguang ရောင်စုံပုံနှိပ် Co., Ltd.
© မူပိုင်ခွင့် 20202023 : All Rights Reserved.